abdi kafi abdi abdille – Wanleweyn – Hoyga Wararka Tayeysan – Wararka Soomaaliya
Author Archives: abdi kafi abdi abdille
Afhayeen Cali Dheere Oo Sheegay War Qalqal Geliye Shacabka Muqdisho
January 2, 2017	Leave a comment 50 Views
Afhayeenka Maleeshiyada Al-shabaab Cali Dheere oo wareysi siiyey Idaacadda afkooda ku hadashay ee Andalus ayaa shacabka Muqdisho usoo direy fariin qalqal ah, kuna muujinayo waxa ay dadka ka aaminsan yihiin. Cali Dheera ayaa sheegay in Muqdisho ay ka dhacayaan doorashooyinka, islamarkaana ay u arki doonaan in dadka deggan Muqdisho ee 3 milyan ah raali ka yihiin in doorashada dhacdo. Waxa ...
Nin Somali ah oo Sabab yaab leh u dilay Xaaskiisii hore, Isagiina is dilay
January 2, 2017	Leave a comment 46 Views
Wararka naga soo gaarayo Magaalada Pretoria ee dalka Koonfur Afrika waxa sheegayaan in nin Soomaali ah uu dilay gabar Soomaali ah oo uu horey ay isku qabeen, kadibna uu isagii is dilay. Ninkan iyo gabadhan ayaa waxay isku dhaleen gabar yar. Guddoomiye ku-xigeenka Jaaliyadda Soomaalida ee Koonfur Africa oo la hadlay VOA-da ayaa xaqiijiyay dhacdadaan xanuunka badan,isagoo sheegay in arintaan ...
LA OGAADAY: madaxda madaxtooyada oo danbi lagu heyto & Hantidii qaran oo..
January 2, 2017	Leave a comment 41 Views
Madaxweynaha waqtigiisa idlaaday Xasan Sheikh Maxamuud ayaa wax badan lagu eedeeyay boobka iyo ku takri falka hantida Qaranka uu dano gaar ah u isticmaalayo. Sheikh Shariif Sheikh Axmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa ku eedeeyay madaxweynaha Somalia Xasan Sheikh in mudada uu xilka hayay uu cunaqateyn geliyay Shacabka Soomaaliyeed,islamarkaana uu ku takri falay hantidii Qaranka. Wuxuu sheegay in madaxtooyada Soomaaliya ...
A.Madoobe oo si cajiib ah uga jawaabay hadal uu Yiri Xasan Sheikh
January 2, 2017	Leave a comment 37 Views
Madaxweynaha maamulka Jubba Land Axmed Madoobe ayaa sheegay iney u diyaargarowbeen la wareegida deegaanada Al-shabaab ay gacanta ku hayaan ee ka tirsan Jubbooyinka. Axmed Madoobe ayaa si gaar ah farta ugu goday in maamulkiisa uu tagayo degmada Bu’aale ee Gobolka Jubbada dhexe oo loo qoondeeyay caasimada maamulka Jubba Land. Degmada Bu’aalle waxaa gacanta ku haya ururka Al-shabaab,maamulka JUbba Land wuxuu ...
SAWIRO: Madaxweynaha J/Land iyo Golihiisa Wasiirada oo go’aan adag soo saaray
January 2, 2017	Leave a comment 39 Views
Madaxweynaha Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa Maanta 1 January Sanadka Cusub ee 2017 wax Golaha Xukuumada uu u jeediyay khudbada Sanad laha ah ee 2017. Shirkii koobad ee Golaha Wasiirada Sanadkan Cusub 2017 waxa lagu falanqeeyay Waxyabahii u qabsoomay Sanadkii hore ee 2016 iyadoo Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam qudbad dheer oo uu Golaha u jeediyay uu kaga hadlay Arimo ...
Akhriso: Magacyada iyo Beelaha ay ka soo jeedaan 5 Xildhibaan oo Maanta lagu doortay Magaalada Muqdisho+Sawirro
December 10, 2016	Leave a comment 51 Views
Wejiga Labaad doorashada kuraasta Aqalka Hoose ee Gobolada Wuqooyi ayaa Maanta waxa ay ka bilaabatay Magaalada Muqdisho. Ilaa 5 Xildhibaan ayaa maanta kusoo Baxay Doorashadii ka dhacday Xarunta Gaadiidka Booliska ee Dagmada C/Casiis. Kuraasta Aqalka Hoose ee Maanta la doortay ayaa Waxa ay ahaayen Kuwo aad Xiiso u leh Maadama xubno muhiim ah ay ku tartamayeen . kursiga Beesha Samaroon ...
Soomaalida oo si weyn uga niyad jabay hadal ka soo yeeray Mareykanka
December 3, 2016	Leave a comment 37 Views
Maxkamad ku taalla Dalka Mareykanka ayaa markale dib u dhigtay kiiska 3 Ruux oo lagu eedeeyay in ay doonayeen qaadista weerar ka dhan ah masjid Soomaalida ay ku leeyihiin Gobolka Kansas ee Dalkaasi. Kiiska loo heysto 3-dan Ruux ayaa Maxkamada waxey go’aan ka gaari doontaa 25-ka bisha April ee Sanadda 2017-ka, sida uu shaaciyay Qaaliga Maxkamada oo lagu magacaabo Eric ...
DEG DEG: Dagaal Xoogan oo ka socda Gobolka Sh.Hoose
December 3, 2016	Leave a comment 33 Views
Dagaalkan oo ah mid xoogan ayaa waxuu hadda ka socdaa inta u dhaxeysa Degaanada Bariire iyo Awdheegle ee Gobolka Sh.Hoose. Wararka ayaa sheegaya in Dagaalkan uu u dhaxeeyo labo maleeshiyo beeleed oo wada degga halkaasi. Weli lama shaacin khasaaraha ka dhashay Dagaalkan maadaama uu weli Dagaalka halkaasi ka socdo.
Muddo kadib, Al Shabaab oo weerar toos ah ka fuliyay Magaalada Muqdisho
December 3, 2016	Leave a comment 29 Views
Xoogaga Xarakada Al Shabaab ayaa Weerar xoogan oo ka dhashay khasaaro kala duwan waxey ku qaadeen Ciidamo ka tirsan kuwa Dowladda Soomaaliya oo ku sugan Magaalada Muqdisho. Weerarkan ayaa Al Shabaab waxey ka geysteen Degmada Hiliwaa ee Magaalada Muqdisho, xili halkaasi ay howlgallo xoogan ay ka wadaan Ciidamada huwanta. Goobjooge la hadlay Idaacad ku taalla Magaalada Muqdisho ayaa waxuu sheegay ...
Midowga Afrika oo sheegay in labo QODOB ay ku taageerayaan Maamulka Hirshabelle (Akhriso QODOBADA)
December 3, 2016	Leave a comment 36 Views
Danjiraha Ururka Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya, ahna madaxa howlgalka AMISOM, Francisco Madeira ayaa waxuu balan qaaday in taageero xoogan ay siin doonaan Maamulka Hirshabelle. Danjire Francisco Madeira ayaa waxuu carabka ku dhuftay in Maamulka Hirshabelle ay ka taageeri doonaan dib u dhiska waddooyinka iyo sugida amaanka Degaanada hoostaga Maamulka uu hogaamiyo Madaxweyne Cali Cabdullaahi Cosoble. Mr. Francisco Madeira ayaa ...